UShandu weMaritzburg wethembisa abalandeli iwini kwiPirates - Impempe
UShandu weMaritzburg wethembisa abalandeli iwini kwiPirates
January 22, 2021 Impempe.com
Umdlali weMaritzburg United, uBandile Shandu unenhlonipho enkulu ye-Orlando Pirates athi ingelinye lamaqembu abophele izingqazu zabadlali kwiDStv Premiership, kodwa khona lapho uthi kumele bayishaye noma ikanjani uma seyibavakashele eHarry Gwala Stadium ngoMgqibelo ngo 5 ntambama.
IBlue Hearts izobhekana neBhakaBhaka ifana nengonyama elimele kulandela ukuthelwa kwayo ngehlazo lika 3-0 yiTS Galaxy phakathi nesonto, emdlaweni weligi obukhona eHarry Gwala Stadium.
Kodwa kwayona iPirates iyazixhugela kulezi zinsuku kulandela imiphumela engagculisi. Noma kunjalo, uShandu uthi iBucs iyingozi futhi kuzomele bazikhandle ukuyibuyisela emuva incela izithupha.
“IPirates yiqembu elihle kakhulu,” kusho uShandu. “Kuzomele sisebenze ngokubambisana, sibe yiqembu elihlangene, omunye nomunye asize omunye bese senza isiqiniseko sokuthi sonke siwakhipha wonke amangwevu. IPirates ihlangene futhi inesipiliyoni, ngicabanga ukuthi okuyosisiza ukungena enkundleni sibe yile Maritzburg elwayo nebambisanayo,” kuqhuba uShandu, oneminyaka engu-26.
IMaritzburg njengamanje isendaweni yesibili ukusuka emuva ngamaphuzu ayisishiyagalolunye ewaqoqe emidlalweni engu-11, kanti uma ingawina kwiPirates ingakwazi ukugxuma iyohlala kweka-11, kodwa lokho kuncike kwimiphumela yamanye amaqembu.
“Uma ubheka ukuthi izinto zithothene kanjani laphaya ngasemsileni weligi, uyabona ukuthi iphuzu nephuzu libalulekile. Kumele nje siqoqe aphelele uma sisekhaya khona sizophuma kulo mgodi esikuwo njemanje.
“Ngiyacabanga uma singawina sizogxuma seqe abaningi ngendlela okusondelenwe ngayo lapha ezansi. Ngicela nje abalandeli bethu baqhubeke nokusibonisa ukuseseka kwabo ezinkundleni zokuxhumana, nathi sizobabuyisela ngokuthi siwole amaphuzu aphelele uma sesibhekene nePirates,” kusho uShandu, owafika kuleli qembu esengumfanyana oqoqa amabhola aphumele ngaphandle.
Previous Previous post: ISwallows yehlulekile ukuqhwakela kwiDStv Premiership ivuma ukubanjwa yiChippa ekhaya
Next Next post: Abaneme abagijimi ngokuhlehliswa kwemiqhudelwano nemijaho yi-ASA